Mafungiro akanaka anobatsira kuvharira musiyano pakati pekugona uye kushupika. - Anotungamira - Quotes Pedia
Maonero akanaka anobatsira kuvhara musiyano pakati pekugona uye kushuvira. - Asingazivikanwe
Tese zvedu takaropafadzwa nazvo dzakasiyana siyana kugona uye matarenda. Sezvo isu apo tinenge tichikura, tinowanikidzwa kune dzakasiyana siyana sarudzo dzatingasarudza mukuumba hupenyu hwedu uye tinononoka kutanga kuruka zviroto zvedu.
Idzi zviroto zvinova kuda kwedu apo tinotanga kutsvaga kwekuzvizadzisa. Inova yedu chishuvo uye shungu. Tisati tasarudza pane zvatiri kudzingirira, tinofanirwa kuongorora nemazvo zvatiri kutevedzera. Kamwe, isu takaisa maziso edu pazviroto zvedu, isu tinofanirwa kuve takasimba uye takatarisana.
Tichaona kuti matambudziko akasiyana achauya kwatiri asi mune izvi zvese, chinhu chakakosha ndechekuchengetedza hunhu. Iwe unozoona kuti paunokura izvo chete hunhu hwako huri kukufambisa kupfuura nemukati. Riri kukubatsira kuyedza zvese zvawange uchitya nazvo.
Iwe unozobuda wega neine simba rakasimba raunokudziridza nekuva nepfungwa dzakanaka. Tora kutadza kunhanho yako uye zvipingaure wega kukurira kutadza kwako. Nenzira iyi, iwe uchazviwana uri pedyo nehope dzako.
Paunokunda matambudziko uye woramba uchienda, uchaona kuti uchakwanisa kukurudzira vamwe zvakare. Iwe unozoita zvishoma nezvishoma kukwanisa kuyambuka iyo kati pakati pekugona kwako uye kushuva. Izvi zvinonyatso kureva kuwana kutsunga uye simba rekubvisa miganhu yako uye kupa zvaunogona.
Izvi zvinobva mukusimudzira mafungiro akanaka. Kana iwe usina kunaka uye uchifungisisa nezvemigumisiro, ipapo iwe uchatsauka uye kutarisa simba rako muzvinhu izvo zvinongokubata shure. Naizvozvo, Zvikomberedze ne positivity, tariro, uye enda mberi mukutsvaka kwako kuzadzisa yako tarisiro.
Mafungiro Quotes Mifananidzo
Kwakanakisa Kwemafungiro Akanaka Quotes Kubva
Yakanaka Yakanaka Mafungiro Quotes
Kukurudzira Attitude Quotes
Yakanaka Maitiro Quotes
Quotes Pane Kureruka Uye Attitude
Quotes On Kukunda Mafungiro
Mapfupi Quotes Pamusoro Pemaonero
Mwari vane hurongwa uye zvese zvakanaka. - Asingazivikanwe
Mwari vane chirongwa cheumwe neumwe wedu. Dzimwe nguva, tinoramba tichipa mhosva…
Zvicheke iwe unononoka. Uri kuita zvirinani kupfuura zvaunofunga. - Asingazivikanwe
Unofanira kuzvicheka zvishoma uye uine chivimbo neunyanzvi hwako. Unogona kufunga kuti iwe…
Kutanga kwakanaka kuchashanda zvirinani pane zvisina kunaka. - Asingazivikanwe
Positivity ndiyo kiyi yehupenyu. Kana usina chokwadi muhupenyu hwako, pane mukana…
Usanzwa uine mhosva nekuita zvakakunakira iwe. - Asingazivikanwe
Usanzwa uine mhosva nekuita zvakakunakira iwe. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Vakadzi vane simba havana kungoberekwa. Izvo zvinogadzirwa nedutu ravanofamba napo. - Asingazivikanwe
Vanhu mugumisiro wemamiriro avo nezviito. Vakadzi ndivo vanokudzwa uye vane simba kupfuura vese…